Ministère de l'Environnement et du Développement Durable | République de Madagascar TETIKASA COMBO+ : FIAROVANA NY ROHIVOAHARY SY NY KARAZANJAVAMANANAINA – Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Ny Politika ankapoben’ny Fanjakana Malagasy (PGE) ary koa ny Velirano faha-10 ny Filohan’ny Repoblika dia nametraka ho tanjona ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary eto amintsika.
Antony nametrahan’ny governemanta ho laharam-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana ny fahatsapana ny fahasimbana misy eo amin’ireo harena voajanahary mampiavaka antsika vokatry ny tsindry ataontsika olombelona ihany.
Ny tetikasa COMBO+ (COnservation, Minimisation des impacts et Compensation au titre de la BiOdiversité) izay natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany dia anisan’ireo tetikasa andrandraina hitondra vokatra amin’ny fiarovana ireo harena voajanahary ireo sy ny rohivoahary manodidina azy. Mandray anjara sy andraikitra amin’ny fisorohana, ny fampihenana ary ny fanerana ny fahavoazana mihatra amin’ny rohivoahary sy ny zavamananaina ny tetikasa COMBO+ izay fanohizana ny tetikasa COMBO.
Isan’ireo firenena enina aty Afrika sy Asia misitraka ny tetikasa COMBO+ i Madagasikara. Mitentina 10 tapitrisa euro ny fitambaran’ny famatsiam-bola ho an’ireo firenena enina ireo izay ny Agence Française de Développement (AFD) sy ny Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) no mamatsy vola. Efatra taona no faharetan’ny tetikasa COMBO+ ka ny taona 2025 no hifarana izany.
Ny MEDD no mpiahy mivantana ny tetikasa izay hiara-hiasa amin’ny Rafi-panjakana isan-karazany, Firaisamonim-pirenena izay voakasiky ny tetikasa, ny orinasa miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, ny mpikaroka ary ireo ONG misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.